Home Wararka Shatiga keenista Qaadka Itoobiya ee la siiyay Farmaajo walaalkiis “Xasan Farmaajo”
[XOG] Shatiga keenista Qaadka Itoobiya ee la siiyay Farmaajo walaalkiis “Xasan Farmaajo”
MOL ayaa heshay ruqsada rasmiga ee la siiyay Madaxweyne Farmaajo walaalkiis kuna sabsan in uu keligis maamulo Qadka la soo gelinayo Soomaaliya ila sanaadka soo socda ee 2022.
Sida ku cad warqada ay MOL ka heshay ilo wareedyo lagu kalsoonan karo, wasarada ganacsiga iyo warshadaha ee hoos tagto Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa Xasan Cabdi Maxamed ee loo yaqaano Xasan Farmaajo siiysay ruqsad shariciysan oo gebi ahaanba uu ku maamulayo ganacsiga Qaadka ee Soomaaliya laga bilaabay April 2021 ila March 2022 oo ah sanadka soo socdo waxaana ruqsada qaalinka ku duugay Cabdiaziz Ibrahim Aden oo ah Agaasimaha Guud ee Wasarada Ganacsiga iyo Warshadaha.
Hoos waxad ka akhrisan karta, soona dejisan karta ruqsada qarsoodiga ah oo ay MOL gacanta ku dhigtay oo cadeeyneysa in Farmaajo walaalkiis gebi ahaanba loo gacan galiyay ganacsiga quseeyo qadka soo gala ama la keena Somalia.
Hasa yeeshe, ruqsadan oo ay MOL gacanta ku dhigtay waxay xaqijiyneysa dhowr arin oo kala ah
1) Madaxweyne Farmaajo oo adeegsanaya awood iyo sharci dowladeed si ehilkiisa uu ugu fudeeyo in ay gacanta ku dhigaan lacagta laga sameeyo qaadka soo gala Soomaaliya iyagoo curiyaminaya ganacsadate kale ee wadanka qaadka soo galin jiray.
2) Sida ku qoran ruqsada ay MOL heshay waxa Farmaajo walaalkiis loo fasaxay in uu ganacsiga qaadka maamulo ila March 2022, taas oo micnaheeda ah in uu Farmaajo si qorsheeyay in uu xukuunka Villa Somalia si joogi ku dhowad 5 bil oo kala.
3) In xiisada u dhaxeeysa Somalia iyo Kenya oo ah mid lagu marin habaabinayay shacabka iyo go’aanka ay Dowlada federalka qadatay ee ku saabsan qaadka Kenya uu ahaa mid lagu raali gelinayo Xasan Maxamed Cabdi (Xasan Farmaajo) si uu madaxweynaha walaalkiis u maamulo lacagta laga sameeyo qaadka soo gala wadanka.
3) In ay jiran heshiisyo badan oo qarsoodi ah oo ay Dowlada Farmaajo gashay oo ay xukuumadiis ka Qarinayso shacabka Soomaaliyeed oo u badan kuwa la xiriira dhaqaalaha iyo hantida dalka.